Root နည်းများ Archive
Sony Z2 D6503 6.0.1 (23.5.A.1.291) Root ပြုလုပ်နည်း
Root နည်းများ, Sony ဖုန်းများ Root လုပ်နည်း
ပထမဆုံး လိုအပ်တာတွေ Download ရယူပါ။ (NEW)_Recovery_for_MM575-291v5.zip D6503_23.5.A.0.575_kernel.ftf Z2_23.5.A.1.291_Marshmallow_Kernel_Flasher.zip UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.zip ပြီးရင် SDCARD ထဲကို UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.zip နဲ့ Z2_23.5.A.1.291_Marshmallow_Kernel_Flasher.zip ကို SDCARD ထဲထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်ပါ။ D6503_23.5.A.0.575_kernel.ftf ကို Flash Tool နဲ့ Flash လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းပါဝါ ပွင့်တဲ့ အထိစောင့်ပါ။ (NEW)_Recovery_for_MM575-291v5.zip ကို ဖြည်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အထဲက install.bat ကို run လိုက်ပါ။ ဖုန်းဟာ Reboot ကျပြီး Twrp ထဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ် TWRP ကနေ တစ်ဆင့် UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323.zip နဲ့ Z2_23.5.A.1.291_Marshmallow_Kernel_Flasher.zip ကို Install လုပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် Root	Read More
j2 Prime SM-G532F/M/G Root ပြုလုပ်နည်း
Root နည်းများ, Samsung ဖုန်းများအား Root လုပ်နည်း
J2 Prime Root လုပ်ဖို့ခက်နေတဲ့သူတွေအတွက် G532M ကို Root နိုင်တဲ့ ဖိုင်လေးပါ အောက်မှာ Download ရယူပါ။ https://mega.nz/#!P0gVVYAJ!l7kwVbjY6jXw0KA0wMCL8FuOAQZPvIfLzZiEqq-7tv8	Read More
Samsung C5 Sm-C5000 6.0.1 Root ပြုလုပ်နည်း
SM-C5000 Root ပြုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေအောက်မှာ Download ရယူပါ C5000 Root ရလာတဲ့ဖိုင်ကို zip ဖြည်ပါ။ odin ကနေ twrp ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို Flash ပါ။ super su zip ဖိုင်ကို sd card ထဲထည့်ထားဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့ TWRP သွင်းပြီးရင် super su ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရပါပြီ။ Read More
Redmi 3s/3x/prime Temp Bootloader Unlock & Root ပြုလုပ်နည်း
Root နည်းများ, Xiaomi ဖုန်းများကုို Root လုပ်နည်း
Redmi 3s,3x ဖုန်းတွေကို Offical Bootloader Unlock လုပ်စရာမလိုပဲ Temp Bootloader Unlock လုပ်ပြီး Root,Twrp တို့ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး မိမိဖုန်းကို Developer Options On ပါ ,Oem Unlock ကို On ပေးထားပါ။ ပြီးရင်အောက်ပါ File များကို Download ရယူပါ။ Patch Unlock Bootloader Twrp Unlock အပေါ်က ဖိုင်နှစ်လုံး Download ဆွဲပြီးပါက adb ကနေ ဖြစ်ဖြစ် jig ကဖြစ်ဖြစ် qualcomm 9008 ကိုဝင်လိုက်ပါ။ Mi Flash ကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Patch Unlock Bootloader zip ကိုဖြည်ပြီး image folder	Read More
Qualcomm ဖုန်းများ Imei ပြန်လည်ရေးသားခြင်း
Error ရှင်းနည်းများ, Root နည်းများ, ဗဟုသုတများ, သတင်းများ
Huawei,Xiaomi,Oppo နှင့်အခြား Qualcomm Chip သုံးတဲ့ဖုန်းတိုင်းစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်ရမှာကတော့ မိမိဖုန်းရဲ့ Diag Port ကို ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတိုင်းတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး Code တူညီခြင်းမရှိပါပြီး Huawei ဖုန်းတွေမှာ *#*#2846579#*#* ဖြင့် Diag Port ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ Oppo -> *#08# Xiaomi -> *#*#717717#*#* အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာတွေကတော့ Phone Call ကနေ Diag Port ကို ဖွင့်တာပါ။ တစ်ချို့ Model တွေမှာ ဖွင့်မရတာမျိုးရှိတက်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Root ဖောက်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ. မိမိဖုန်းကို အရင်ဆုံး Root လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Miracle Eagle Eye Crack ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ မရှိသေးသူများ ဒီမှာ Download ရယူပါ။ File Password	Read More
Redmi Note3Pro Any version Temp Bootloader Root !
Redmi Note3Pro ( Qualcomm ) ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် သတင်းကောင်းလေးပါပဲ Global Rom တင်ပြီး မြန်မာစာ အဆင်မပြေသူများ Bootloader Unlock အတွက် အဆင်မပြေသူများ Version အမြင့်တင်ပြီး Root ဖောက်မရသူများအတွက် ဒီနည်းလမ်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Requirement Need Stock Fastboot Rom ( နှစ်သက်ရာ Version နှစ်သက်ရာ fastboot Rom ) Supersu 2.71 zip Root.zip Download ( Redmi Note3Pro Root File ) Password – regeneration ပထမဆုံးလိုအပ်တာကတော့ Fastboot Rom တွေကိုနှစ်သက်ရာ	Read More
ဖုန်းတော်တော်များများကုို အလွယ်တကူ Root နုိုင်တဲ့ iroot 1.8.7.1
Root နည်းများ, Window PC သုံး Software များ
ဖုန်းတော်တော်များများကုို Root လုပ်နုိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရလွယ်တဲ့အတွက် Service သမားတုိုင်းလုိုလုိုအသုံးပြုတဲ့ Tool ပါ အောက်မှာ Download ရယူပါ။ Read More
123	Facebook Live Traffic Stats